IJA 6464 တွင် AJA သည် KUMO 12-2019G ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja IBC 6464 မှာ KUMO 12-2019G မိတ်ဆက်
Aja IBC 6464 မှာ KUMO 12-2019G မိတ်ဆက်
တိုးမြှင့်မှုအတွက် routing high စွမ်းရည် 12G-SDI signal ကို
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ, 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 13, 2019) ရပ် - ယနေ့အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2019 မှာ, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်ဖော်ပြသ KUMO 6464-12Gအရည်အသွေးမြင့်မား, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော signal ကိုလမ်းကြောင်းများအတွက် 64x 12G-SDI သွင်းအားစုများနှင့် 64x 12G-SDI လက်ငင်း featuring အသစ်တစ်ခု SDI Router က။ KUMO 6464-12G ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, စာတိုက်နှင့် proAV ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်အကွာအဝေးကိုက်ညီခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ 12G-SDI ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, လုံခြုံရေးနှင့်တိုးမြှင့် bandwidth ကိုအခွင့်ကောင်းယူခွင့်ပြုပါတယ်။
Workflows ၏တိုးမြှင့်မွေးစားနှင့်အတူပိုမိုရှုပ်ထွေးကြီးထွားအဖြစ် "12G-SDI အတွက်အကျိုးစီးပွားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ပညာရှင်များအကြားတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် UltraHD, HDR နှင့်ပင် 8K ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KUMO 1616-12G နှင့် KUMO 3232-12G router များရန်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုအထူးသဖြင့်ဘယ်မှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့, ဒါကြောင့်သဘာဝကျနော်တို့ 12 သွင်းအားစုများနှင့် 6464 ရလဒ်နှင့်အတူ KUMO 12-64G ကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတိုးမြှင့်စွမ်းရည် 64G လမ်းကြောင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းအားဖြည့် နှင့်သိသိသာသာ routing ကိုစွမ်းရည်မြှင့်ဝေဖန်နေကြတယ် "ဟု Nick Rashby သမ္မတကလည်း, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
SDI နှုန်းထားများ၏အလိုအလျောက် reclocking နှင့်အတူ BNC ဆက်သွယ်မှုထံမှ / မှပါဝင်သောအသံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူလမ်းကြောင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုဗီဒီယို KUMO 6464-12G, အတူ။ အသုံးပြုသူများသည်အလွယ်တကူ Dual-Link ကို, 4K အဘို့အမျိုးစုံသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များပေါင်းစပ်နိုင်အောင်အဆိုပါ KUMO router များ, ganged dual-နှင့် Quad-port ကိုလမ်းကြောင်းများအတွက် configured နိုင်ပါသည် UltraHD နှင့် 8K Workflows တစ်စက်ရုံတစ်လျှောက်လုံး, compressed လုပ်မထားတဲ့ချုံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်း 4K အချက်ပြမှုများ၏ချောမွေ့စွာ routing ကိုဖွင့်။
4K များအတွက်လူပျို cable ကိုထောက်ခံမှု /UltraHD ကျစ်လျစ် 12RU ပရိုဖိုင်းအတွက် 4G-SDI routing ကို
64x 12G-BNC သွင်းအားစုများနှင့် 64x 12G-BNC ရလဒ်
8K, 4K, UHD, 2K, HD, SD က resolution ကိုထောကျပံ့
အတူလိုက်ဖက်တဲ့နှင့်ထက်ကျော်လွန် SMPTE သတ်မှတ်ချက်များ
Quad-Link ကို, dual-Link ကို, 4K နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် /UltraHD နှင့် multiport SDI နှင့်အတူ 8K / UltraHD2 တစ်ကြိမ်မှာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလေးခုသတင်းရပ်ကွက်အဘို့အပြောင်း
8 Salvos အထိတစ်ဦးချင်းစီ KUMO Router ထဲတွင် configured နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပါတယ်
စံ Web-browser ကိုအပေါ်အဝေးထိန်းဘို့ embedded web server သို့
Aja KUMO Ethernet ဟာထိန်းချုပ်မှုပြားကိုထောက်ပံ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်
မြက်ချိုင့် Native Protocol ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အတူ 1x သည် RS-422
လွယ်ကူသောကနဦး network ကို setup ကိုများအတွက်က USB port ကို
အော်တို Re-clocking SDI နှုန်းထားများ: 270 / 1.483 Gbps / 1.485 Gbps / 2.967 Gbps / 2.970 Gbps / 5.934 Gbps / 5.940 Gbps / 11.868 Gbps / 11.880 Gbps
format Agnostic, 270 Mbps ထိ - 12 Gbps
အသံအပါအဝင်အားလုံး SDI embedded အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးဒေတာဖြတ်သန်း
ကိုးကားစရာ Input: အင်နာလော့အရောင်က Black (1V) သို့မဟုတ် Composite Sync ကို (2V သို့မဟုတ် 4V) Loop, Nonterminating
10 / 100 / 1000 Ethernet (RJ-45), REST API ကို
မလိုအပ်တဲ့ power supply option ကို
KUMO 6464-12G Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့် $ 8995 အမေရိကန် MSRP အဘို့ဤဆောင်းဦးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.aja.com/products/kumo-6464-12g.
1993 ကတည်းက Aja ဗီဒီယိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ဗွီဒီယိုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့, ဗီဒီယို interface ကိုနည်းပညာများ, converters အဖြစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Aja ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အဦမှာအများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့၏ website မှာကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: IBC 12 မှာ Aja မိတ်ဆက် HDR Image ကို Analyzer 2019G
နောက်တစ်ခု: Aja သင်္ဘော IBC 44 မှာ 12G-SDI I / O နှင့်အတူ Corvid 12 2019G